Waayo, mid kasta oo jecel xaqse, quruxda knockout, Daar wayn, iyo qorrax beero canab ah ku maydhaa, stretch muuqaal dabiici ah taas oo ay weheliso River Rhine waa meesha waa in aad u tagto. kortaan The tareenka u dhexeeya magaalooyinka Jarmal Cologne iyo Mainz waa mid ka mid weligiis iyo weligiisba aad xusuusan doonaa. Bbc sawir-kaamil ah ay ka tagi doono aad neefsan! romantics True rumeeyey dhammaato farxad iyo Sixir ekayd Khayrja doonaa xeryahoodii jiidasho ayaar loo marayo canab ah oo cagaar ah. The tareenka West Rhine ayaa adduunka ka caan oo qayb ka ah "Romantic Rhine" safarka, sidaa darteed haddii aad heysato qof aad jeceshahay in aad la socdaan keeno, sidaa sameeyaan. Waxaad heli doontaa waqti ah la ilaawi karin, la mid ah kuwa kale oo badan oo ka dhigay tareenka West Rhine qayb ka mid ah safaradahooda tareenka Yurub.
Lyonka quruxda badani waa magaalada saddexaad ee ugu weyn France iyo xarunta run firfircoon ee dalka. Waa xaqiiqo ah dheeraad ah oo lagu noolaan karo iyo Noqosho dabacsan ka badan caasimada, bixiya madadaalada rukun kasta. Lyon oo dhan uu leeyahay: matxafyada, maqaayado, yaalaaan, iyo dukaamo asalka ah, iyo sidoo kale a tiro badan oo ah baararka iyo cawaysyada. Waxaa sidoo kale waa jaamacadda firfircoon magaalada, sidoo booqo on your tours tareenka Yurub. dhismayaasha quruxda badan Cafiyi River Rhone ah, ballaaran beeraha, iyo jawi isufaan saamayn dhaqanka Faransiis kala duwan - waxa aan u jeclaadaan?
No tours tareenka Yurub waa dhamaystiran oo aan fuushanaa iyada oo Bbc picturesque ee Tuscany. Tani gobolka ee dalabyo dhexe ee Italy indhaha breathtaking iyo waxay bixisaa dhowr ah dhibcood oo xiiso aad gabi ahaanba waa inay booqdaan. From ugu halyeey Renaissance tahay Michelangelo iyo Botticelli inay shuqullo wanaagsan Apennines Hooyada Dabeecadda, Tuscany waa heer sare. A safar tareen fiican loo qorsheeyay aad qaadan karto ee xeebaha ku teedsan Badda Tyrrhenian, ama ha aad arki beero canab ah ka socdeen ee Chianti.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-european-train-tours%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)